Sida loo Download Songs ka Lugood (Lugood free music download)
Lugood siiyaan hab aad u wanaagsan qabanqaabada, kaydinta, maaraynta iyo degsado music . Marka aad music ama filimada iibsato ka Lugood aad u soo dejisan karo mid ka mid ah kombuyuutarro aad guriga ama xafiiska. Kala duwan oo ka mid ah fursadaha lacag la'aan ah ayaa laga heli karaa si toos ah uga dukaanka Lugood. Maqaalkani waxa uu idinku hanuunin ku saabsan hababka kala duwan ee loo heli karo degsado iyo heeso ka Lugood wareejinta .
Qaybta 1.How in gacanta lagu wareejiyo songs files ka Lugood in Personal Computer (PC)
Qaybta 2.How inay u dhoofiyaan music ka Lugood in PC via TunesGo
Qaybta 3.Get aad Lugood music free qalabka Android via TunesGo
Qaybta 4.Get aad Lugood music free in nidaamka qalliinka iPhone (macruufka) qalabka via Gurtida Tag.
Qaybta 1. Gacanta heeso kala iibsiga files ka Lugood in Computer Personal ah (PC)
Lugood waa meel fiican oo ay u leeyihiin oo dhan heeso iyo filimaan hal meel oo abaabulan si kastaba ha ahaatee aad doorato. Waxay bixisaa mid ka mid ah meelaha ugu fiican in uu kaydiyo, dhagaystaan, oo kala soo bixi music cusub. Si kastaba ha ahaatee, sida markii ay u dhacaan, mid waxay dooran karaan inay u gudbiyaan music ka Lugood in computer si ay u siiyaan meel dheeraad ah oo music cusub ee soo socda. Haddii kale, mid ka mid ka Lugood wareejin karaan music in computer ah marka mid ka mid ah wuxuu iibsanayaa computer cusub oo loo baahan yahay ee music hore.
Kaydinta music kombiyuutarka shakhsi siisaa faa'iidooyinka ka mid ah. Marka hore, marka telefoonka ama ka mid ah awoodda uu yahay, waxaad ku dhegeysan kartaa miyuusigga ka kombiyuutarka. Sidoo kale, gurmad ah la abuuri karo, ama meel kale oo ka mid ah macluumaadka waa la joogo in xogta ay dhacdo waxaa laga badiyay codsiga Lugood ah. Si aad u wareejin files music ka Lugood aad iPhone, Ipad ama Ipad taabto, talaabooyinka soo socda waa in la raacaa:
Connect qalab aad si aad u computer via cable USB ah.
Riix icon Lugood ah.
Tag your computer oo la helo folder bartilmaameedka.
Jiid Lugood folder ku jiraan music si ay folder music on your computer shakhsi.
Qalab USB waa sii dhawrsan inta ay socoto oo dhan.
Qaybta 2. dhoofinta music ka Lugood in PC via TunesGo
TunesGo Saaxiib kama dambaysta ah Lugood taageera labada Android iyo nidaamyada hawlgalka iPhone sidaas jabiyay awood la'aanta hore ee Lugood si ay u taageeraan qalabka Android. Si aad u awoodo in ay ka Lugood wareejiyo music mid ka mid computer shakhsi loo baahan yahay in ay software ah ku rakiban. Haddii barnaamijka ku socota maxkamad lacag la'aan ah, in uu socon doono oo kaliya shan iyo toban maalmood, oo kaliya ugu badnaan labaatan heeso lagu wareejin karaa. Marka barnaamijka waxa lagu xiraa, tallaabooyinka soo socda si sahlan waa in la raaco:
Connect computer si ay qalabka isticmaalka cable USB ah.
Burcad barnaamijka TunesGo ah. Barnaamijka ayaa iskaan doonaa phone oo dhan
Dhinaca bidix ee suuqa kala Lugood ee guji 'warbaahinta'
On warbaahinta, suuqa kala tak "music '
Dooro music aad rabto in lagu wareejiyo
Dhinaca bidix ee sare dooro 'dhoofinta'
Riix dhoofiyo computer shakhsi (PC) ama Mac
Hel ka sii faahfaahin >> Music Transfer ka Lugood in PC / Mac
Qalab USB waa in weli xiran oo dhan nidaamka oo dhan.
Qaybta 3.Transfer Lugood music free qalabka Android via TunesGo
TunesGo waxaa loogu talagalay in lagu wareejiyo muuqan content Lugood in android. Ka hor inta dhalashada TunesGo, aad bay u adag tahay in la wareejiyo files music aad ka mid casriga ah si ay u sabab kale arrimaha waafaqsan. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la alifay ee TunesGo, waxa uu si buuxda u bedelay sida ay tahay hadda suurtagal ah si ay u gudbiyaan aad music Lugood in Android. TunesGo u dhaqmo sida buundada u xira noocyada kala duwan ee casriga ah gaar ahaan marka isku xirta inta u dhaxaysa nidaamka ka hawlgala Android iPhone. Tallaabooyinka soo socda ayaa muhiim ah marka wareejinta files music ka iPhone ah isticmaalka TunesGo.
1.Install TunesGo oo abuurtaan. Lugood bilaabi doona si toos ah on TunesGo.
2.Connect qalab si aad u computer ka via cable USB iyo bandhigay soo socda lagu arkay doonaa.
3.TunesGo isla markiiba ogaadaa qalab Android iyo maaraysa macluumaadka oo dhan. Qalabka android lagu soo bandhigi doonaa interface ugu weyn.
4.On dhinaca bidix ee interface ka hooseeya ku jira liiska maktabadda Lugood, dooro "music" category iyo heesaha oo dhan in Lugood ee lagu soo bandhigi doonaa.
5.Select songs in aad rabto oo guji "Dhoofinta" iyo ka dibna "Dhoofinta in Android". Waa in aad loo hubiyo in cable USB uusan heli muhu in geeddi-socodka. Wixii Android, waxay taageeri doonaan qalab kala duwan: Android 2.1 si ay Android 5.0 iyo macruufka 5 ilaa macruufka 8/9.
Intaa waxaa dheer, TunesGo wuu kuu fasaxayaa in ka Android sidoo mid si ay u gudbiyaan music in Lugood Library.
Hel ka sii faahfaahin >> Transfer music ka Lugood in phone Android
Qaybta 4.Transfer Lugood music si xor ah u iPhone iyo qalabka kale ee macruufka via TunesGo.
TunesGo ma aha oo kaliya siiyaan xal wanaagsan xidhiidhinaya qalab kale laakiin sidoo kale kaga dayanayaan files si Lugood si toos ah uga qalab aad. Haddii aad jeceshahay in aad tusi aad music ama ugu cadcad la wadaag saaxiibadaada, TunesGo ka dhigayaa suurto gal ah in ay la wadaagaan Facebook, Twitter ama Email.
TunesGo ka dhigayaa suurto gal ah si ay u gudbiyaan music aad jeceshahay ka Lugood in aad iPhone ama iPad by kaliya click ka tago oo aan u baahnayn joogitaanka kombiyuutar si ay u gudbiyaan faylasha. Intaa waxaa dheer ku qaadato qadar yar oo waqti si ay u gudbiyaan music ah marka la barbar dhigo kale oo kale. Kuwa soo socda talaabooyin fudud waa in la raacaa marka wareejinta files music ka Lugood in qalab macruufka ah:
1.On page default guriga, guji music kala iibsiga. gala bogga kala iibsiga marka qalabka ku xiran.
2.Click on "dejinta"
3.Select "dejinteeda ka Lugood". Screen waa u muuqdaan sida lagu muujiyey in shaashadda hoose.
4.Your playlist muuqan doonaa shaashadda. Dooro heeso aad rabto in lagu wareejiyo ka Lugood in qalab aad iyo guji "ok".
Hel ka sii faahfaahin >> Music Transfer ka Lugood si iPhone / iPad / iPod
TunesGo waa barnaamij wejiyo in awoodo gudashada hawlaha kale oo badan oo Lugood ma aan samayn karo ay u gaar ah. Hawlaha waxaa ka mid ah suuqa kala iibsiga ee Waxaad Tube music in Lugood, wareejinta music ka PC / Mac qalab, wareejinta music ka Lugood qalabka, kala iibsiga ee ka kooban warbaahinta ka Lugood in Android, dejinta Jidka default for files wareejiyo Lugood, dejinta SD dibadda kaarka sida waddada u hagaagsan default for files wareejiyo kuwo kale Android. Qaar ka mid ah muuqaalada caanka ah ee TunesGo ka mid ah:
Maamulka wanaagsan ee files music
Horumar la yaab leh in maamulka file
Better Waxaad heli Tube
Xogta More casri ah nadiifinta. TunesGo bixisaa user ee ikhtiyaarka ah oo gebi ahaanba la nadiifiyo maktabadda music iyada oo loo marayo falanqayn nadiifinta dhamaystiran.
Maktabadda music A waa xannibaad free. Waxaa xataa si toos ah u baddalaya qaabab faylka in la jaan qaada qalab aad.
> Resource > Lugood > Sida loo soo bixi heeso ka Lugood